Q1 2076/77(Q1 2076/77) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
आज डलरको भाउ स्थिर, युरोको घट्यो, पाउन्ड स्टेर्लिङको बढ्यो (अन्यको सूचीसहित)
काठमाण्डौ । आज सोमबार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरोको घटेको छ भने पाउन्ड स्टेर्लिङको बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि सोमबारका लागि कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ स्थिर रहेको हो। आज प्रतिडलर खरिददर ११८.२७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११८.८७ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो पनि डलरको भाउ स्थिर नै रहेको थियो। हिजो पनि...
मल्टीपर्पस फिनान्सको खुद नाफामा ३५८.७०%को छलाङ, प्रतिसेयर आम्दानी रु. ९.११
काठमाण्डौ । मल्टीपर्पस फिनान्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा ३५८.७० प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । पहिलो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले २१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा संस्थाको सञ्चालक...
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पहिलो त्रैमास वित्तीय विवरण सार्वजनिक, कस्तो छ प्रगति ?
काठमाण्डौ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले गत वर्षको तुलनामा ६.२८ प्रतिशतले खुद मुनाफा बढाउन सफल भएको छ । गत वर्ष बैंकले ६० करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकले...
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा १ अर्ब ९६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ । यो नाफा बैंकहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नबिल बैंक लिमिटेड पछिको तेस्रो ठूलो मुनाफा हो । पहिलो त्रैमासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र नबिल बैंकले १ अर्ब १२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद...
एनसीसी बैंकको खुद ब्याज आम्दानी बढ्यो, नाफा घट्यो
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ३४ करोड ३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा २०.६१ प्रतिशतले खुद नाफा घटेको छ । गत वर्ष बैंकले ४२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा...
मेगा बैंकको खुद नाफा ८.११%ले बढ्यो, वितरणयोग्य मुनाफा रु. ३२.५६ करोड
काठमाण्डौ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ४३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा ८.११ प्रतिशत खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । गत वर्ष बैंकले ४० करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकले वितरणयोग्य...
मुक्तिनाथ विकास बैंकको खुद नाफा रु. २२.८७ करोड, ईपीएस रु. २९.८६
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा ५.२३ प्रतिशत खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । गत वर्ष बैंकले २१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकले...
गोर्खाज फाइनान्सको खुद नाफा १८.५१%ले घट्यो, रिजर्भ ८.७९%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा २ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार सस्थाले यो खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १८.५१ प्रतिशतले कम हो । गत वर्ष संस्थाले ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिका संस्थाको सञ्चालन मुनाफा २...
श्री इन्भेस्टमेन्टको खुद नाफामा २०.१७%को बढोत्तरी, रिजर्भ थोरै घट्यो
काठमाण्डौ । श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा २ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले गत वर्षको तुलनामा २०.१७ प्रतिशतले खुद नाफा बढाएको हो । गत वर्ष संस्थाको खुद नाफा २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा संस्थाको...
एशियन लाइफ: बिमाशुल्क आर्जनमा ३०%र जीवन विमा कोषमा २९% को फड्को
काठमाण्डौ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बिमा शुल्क आर्जन ३०.२२ प्रतिशतले बढाएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ६८ करोड २४ लाखमा सीमित रहेकोमा त्यो बढेर समीक्षा अवधिमा ८८ करोड ८६ लाखको उचाईमा पुगेको हो । कम्पनीले जीवन बिमा कोषलाई २९.२३ प्रतिशतले बढाएको छ । अघिल्लो...